Xaflad Si Gaara Loogu Soo Dhaweynayo Madaxweyne Xasan Sheekh Madaxtoyada Garowe +SAWIRO – idalenews.com
Xaflad Si Gaara Loogu Soo Dhaweynayo Madaxweyne Xasan Sheekh Madaxtoyada Garowe +SAWIRO
Madaxweynaha DF Somalia Xasan Shiikh Maxamuud iyo madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiraxman Shiikh Maxamed Farole ayaa si wadajir ah uga qaybgalay xaflad ka dhacdey madaxtoyada taasi oo lagu soo dhoweynayay casho sharag madaxda ka socotey DF Somalia.
Madaxweyne ku xigeenka ,gudoomiyaha Barlamanka, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan DF iyo Puntland ,madaxda safaarada Ethiopia ,marti sharaf isku jirtey culimo ,nabadoono ,aqoonyahano ,dhalinyaro iyo haween ayaa intuba ka soo qaybgalay.
Kooxda Waaberi Puntland ee Abwaan Shube hogaamiyo ayaa heeso iyo riwaayado soo bandhigtey ka tarjumaya xaalada dalka ,halka Gabayo ay soo jeedsheen abwaano uu ka mid yahay Jaaamac Kadiye ,Xaliimo Puntland iyo Cawdgale.
Gudoomiyaha Guddiga doorashooyinka Puntland Maxamed Xasan Barre ayaa ka waramay bilowgii geedi socodka Dimoqraadiyada Puntland heerarkii kala duwanaa ay soo martey iyo halka ay beegsaneyso.
Dhankiisa ayaa wasiirka Waxbarashada Puntland Cabdi Faarax Juxa wax ka tilmaamay waxbarashada Puntland heerkay gaarsiisantahay ,isagoona ka codsadey DF inay Puntland saamigeeda ka siiso deegaha caalamiga ee lagu helo magaca Somalia iyo guud ahaan wixii arrimaha bulshada horumarinaya.
Madaxweyne Cabdiraxman Farole ayaa ka soo jeedshay khudbad dheer uu kaga hadlay Puntland ,DF Somalia ,Amaanka ,hirgelinta nidaamka Federaalka ,wax soo saarka khayraadka dabiiciga iyo Xisbiyada Puntland.
Xildhibaaan Faarax Sulub oo ka mida barlamanka Puntland ayaa ugu yeerey madaxweyne Xasan Shiikh inay tixgelin u yeelaan arinta gobollada Sool ,Sanaag iyo Cayn oo ka mida Puntland doonaya Somalinimo,waxana uu raacshay in muddo lix sanno ciidamo ay dul joogaan iyagoona aan helin wax horumarin ah oo ku saabsan noloshooda sida uu hadalka u dhigey.
Waxa uu sheegey inay muhiim tahay Puntland inay qayb ka noqoto wadahadal kasta oo DF Somalia ay la yeelanayso Somalida kale qaybaheeda ,maadaama ay qayb ka yihiin Dowladda Soomaliyeed sidoo kale waxa uu ku baaqey dhamaystirka Dastuurka iyo in lagu dhaqsado dhismaha maamul goboleedyada kale ee ka mid noqonaya DF.
Dadaalada caalamiga ee la-dagaalanka Al-shabaab iyo burcad badeeda ayuu sheegey Farole in maamulkiisu soo dhoweynayo ,waxana uu sidoo kale soo dhoweeyey cid kasta oo Somalia maamul iyo dastuur u gaar ah dhisaneysa iyagoo ka mid ah DF Somalia.
Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud oo soo xirey xafladan ayaa ka hadlay Federaalka Somalia,waxana uu sheegey in xalka Somalia uu ku jiro gacanta Somalida.
”Booqashadan iyo hadaladii laga jeedshay caawa meeshan waa mid xasuus gaar ah igu reebeysa” ayuu yiri Xasan Shiikh oo Somalida ugu yeerey iskaashi iyo isku dulqaadasho sidi loo gaari lahaa dowladnimo iyo soo celinta qarankii burburey.
”Somalia in la gaarsiiyo dalcad aan dib loogu soo noqon karin ayaanu taaganahay maanta ,waxyaabaha xanuunka leh ee shalay dhacay in lagu laabto dib ayay u dhigeysaa Somalia” ayuu Xasan Shiikh yiri.
Cunaqabadeynta Hubka ee Somalia laga qaadey ayuu ku sheegey madaxweynaha Somalia in micneheedu yahay qabiil gaar ah in la hubeeyo balse ku tilmaamay mid ay ku doonayaan la-dagaalanka kooxda Al-shabaab.
Ujeedka Booqashadiisan Garowe ayuu ku micneeyey Xasan Shiikh wadatashi ku aadan shirka London oo Somalia lagu taageerayo islamarkaasina dib loogu soo celinayo dalka wajahada dalalka caalamka.
Ugu danbeyntii ayuu ku bogaadiyey dadweynaha reer Puntland go’aanka ay ku dhisteen maamulkan ,waxana sidoo kale uu guul ku tilmaamay geediga dimoqraadiyada Puntland mudadii koobneyd ee shaqada baaxada lagu talaabsadey.
Lama shaacin ilaa iyo hada intay qaadaneyso booqashada Xasan Shiikh ee magaalada Garowe ,waxana war ka soo baxay xafiiskiisa lagu sheegey inay qayb ka tahay socdaal uu ku marayo gobollada dalka isagoona horey u tagay gobolada Hiiraan iyo Bay.
Daawo: Nin Mareykan ah oo Hotel ka dhistey Xeebta Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho
Ciidamada Dowladda oo xoog kula wareegay gacan ku heynta Degmada Ceel Garas